အဲယားဘတ်စ် Empty ခြေထောက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်း
စတိုင် & သစ်လွင်မှု
အများဆုံးစတိုင်, comfortable and innovative way to fly around the world is by using Airbus Executive Jets. These take the private flying experience toacompletely new level. When you want to fly private and reach your destination safely and inatimely manner, you can always count on an Airbus.
You need to fly private if you want to avoid the hassles ofacommercial flight. သငျသညျပုဂ္ဂလိကပျံသန်းသည့်အခါ, you avoid unnecessary delays. ထိုကွောငျ့, you reach your destination on time. You will not have to queue for long to have your luggage checked. With private flights, there are no security checks.
တစ်အဲယားဘတ်စ်နှင့်အတူ Comfort ပျံသန်း
အဲယားဘတ်စ်စီးပွားရေးလေယာဉ်တင်မော်ဒယ်များထိပ်ဆုံးနှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိ. သူတို့ဟာထိပ်တန်းထစ်အသံ-အမြင်အာရုံစနစ်များအပါအဝင်နောက်ဆုံးပေါ်ဇိမ်ခံပစ္စည်းရှိ. အဲယားဘတ်စ်လေယာဉ်လုံလောက်သောခြေထောက်အာကာသနှင့်အတူအနုပညာအမတ်နေရာပြည်နယ်ရှိ. ထိုကွောငျ့, သူတို့ခရီးသည်အငြိမ့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် Airbus Germanwings ကိုယ်စားလှယ်လောင်းယာဉ် acciones မှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွေ့အကြုံတိုင်းတစ်ခုတည်းအခိုက်ပျော်မွေ့စေ.
အဲယားဘတ်စ်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်ခရီးသည်အမြဲနှစ်သိမ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးရ, အာကာသနှင့်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်. ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖြစ်ပါသည်; Airbus private jets have wide and tall cabins.
Airbus isaworld leader when it comes to aviation technologies. The Airbus research and development team has pioneered in most aerospace frontiers. ထို့ကြောင့်, if you want the best private jets that feature the latest mechanics, you should choose Airbus Business aircraft models.
custom အတွင်းပိုင်းဘိုးအင်း 747 ပုဂ္ဂလိကဂျက် Decoration